Zindla Kahle Ngokungenela Kwe-Brainwave - U-Edwin Van Der Hoeven
Hlela B - I-Bitcoin ikusasa lethu
Izinhlobo eziyisisekelo zokuzindla ze-2
Zindla kangcono nge-Brainwave Entrainment
Ukupholisa ukuzindla kanye nengqondo yenyanga egcwele
AmaMantra avela eBuddhism
I "Vajra Guru" mantra evela ePadmasambhava
Ama-chakras ayi-7 omzimba wethu we-etheric
Ukuzindla okuyisisekelo kwe-chakra resonance
Ukuzindla kwe-Sacral chakra resonance
Ukuzindla kwe-solar plexus chakra resonance
Ukuzindla kwenhliziyo ye-chakra resonance
Ukuzindla kwe-Throat chakra resonance
Ukuzindla kwe-chakra resonance yesithathu
Ukuzindla komqhele we-chakra resonance
Umuntu Ozwela Kakhulu (HSP)
I-HSP - Ukuqonda Okubanzi Okuphezulu
Izici ezi-5 zoMuntu Ozwela Okuphezulu
Ingabe ungumuntu ozwela kakhulu? Thatha isivivinyo se-hsp
Ukuzwela okuphezulu emsebenzini
Amathalenta angama-5 esisebenzi esizwela kakhulu
Bhuka ukubonisana okuphakathi
Nikeza ubufakazi ngokuqonda okucacayo kwemizwa
Ukuphulukisa, ukukhuluma nobuciko ngeTrance
U-Edwin van der Hoeven CSNU, osebenza ngezemimoya
Ayikho imikhiqizo enqoleni yakho yokuthenga
Januwari 8, 2014
Het doel van Ukungena kwe-Brainwave isungulula ubuchopho kumafrikhwensi (i-beta, i-alpha, i-thetha, i-delta, i-gamma) ahlotshaniswa nezifundazwe ezithile zokuqwashisa. Cabanga ngemisebenzi ehlukene yengqondo efana
i- 'isimo sokuzindla sokwazi'.
Izingqondo zethu ziyinethiwekhi eyinkimbinkimbi ngendlela emangalisayo yezinqubo ze-neural futhi imisebenzi esezingqondweni zethu ingalinganiswa njengamagagasi obuchopho. Ngokulinganisa amaza obuchopho, siyabona ukuthi ubuchopho buhlala buvumelana nalokho okuqondwa izinzwa zethu nendlela esisebenza ngayo lolo lwazi. Amagagasi obuchopho asitshela ukuthi umuntu unasiphi isimo semisebenzi nemisebenzi yengqondo ehamba nayo.
Lokhu okubonayo lapha ukukalwa kwenani lemizuzu lapho umugqa obomvu ubonakala khona ikakhulukazi; IDelta - ukucabanga. Kancane ukuphumula ekuqaleni. Ngemuva kwalokho ukuphakama kwesinye isikhathi lapho ubona khona isikhala esithe xaxa phakathi kweDelta ne-Alpha futhi ekugcineni konke akuphumuli futhi. Iziqongo yizikhathi lapho ngivule khona amehlo ami futhi ngabheka isilinganiso.
Vumelanisa amaza obuchopho
Ngoba ubuchopho bethu buqhubeka nokuzivumelanisa nezimpawu ezivelele kunazo zonke abazitholayo ngezinzwa, nazo zingagqugquzeleka. Ngokusebenzisa isigqi esaziwa ngokuthi 'binaural' kanye nesigqi 'monaural' namathoni we-isochronical, noma Ukungena kwe-Brainwave, singakwazi ukulawula ama-brainwaves, njengokungathi. Ukuvumelanisa kwawo womabili ama-hemispheres obuchopho - I-Hemispheric Synchronization - ungumphumela wokuphela ofiselekayo we-Brainwave Entrainment. Kuyisimo sokuqaphela lapho womabili ama-hemispheres akhombisa amaphethini nomsebenzi owodwa. Ngokuvamile kuthiwa abantu abane-ukuvumelanisa okungcono bajabule ngokwengeziwe, bazinza ngokomoya futhi bathambekele ekuguleni kwengqondo. Lokhu kubonakala ikakhulukazi kubantu abahlala bezindla futhi bethi bajabule ngempilo yabo.
Amabhendi ejwayelekile yamagagasi obuchopho
Ukwahluka kwenziwa phakathi komkhawulokudonsa ohlukene wokuqwashisa nobuningi babo obuhlobene. Sikhuluma ngamafrikhwensi mayelana neHertz, ehambelana ne-1 wave noma i-vibration ngomzuzwana.
IBeta - 12 ukuya ku-30Hz
Amagagasi obuchopho ku-Beta bandwidth ingeyokwazi kwethu okuvamile kokuvuka. Lokhu kuhambisana nokuqwashisa okuhlobene, ukucabanga okunengqondo, ukuxazulula izinkinga, ukugxila neminye imisebenzi yengqondo esebenzayo. Ubuye ukulesi simo sokuqwashisa ngesikhathi semidlalo nasekuxoxeni nabanye abantu.
Amazinga aphezulu weBeta angaba umphumela wokuxineka, ukuthokozela noma ukungabinakho ukuthula. Noma kufanele ube seBeta ukwazi ukwenza imisebenzi yakho ejwayelekile yansuku zonke, abantu abaningi basenkingeni ephezulu yokuhlobene nokucindezela.
I-Alpha - 7 kuya ku-12 Hz
Amagagasi obuchopho be-Alpha ahamba kancane imvamisa ngokuqhathaniswa ne-Beta ngakho-ke ngokwemvelo anikeza ukwazi okwengeziwe okuvuselelekile. Isimo sokuqashelwa sivame kubantu abanemvelo ezolile nabaphumuzayo. Kunjengokungathi uyaphupha noma uvala amehlo akho ukuzindla. Lokhu kuvama kukhuthaza ukucabanga, inkumbulo, ukugxila, ubuqambi futhi kunciphisa ukucindezela, okuzuzisa ukufunda.
Ukuzindla kubangela ukukhuphuka kwamaza we-Alpha ebuchosheni kanye nekhono lokukugcina lokhu ezintweni zansuku zonke. Ezinganeni, i-Alfa ethe xaxa ibonwa kakhulu kunabantu abadala.
Theta - 4 to 7Hz
Amagagasi obuchopho be-Theta abonakala ekuphumuleni okujulile nokuzindla, ukulala okukhanyayo kanye / noma ubuthongo be-brake lapho uphupha khona. Futhi lapho kusebenza khona umqondo we-subconscious futhi uyakwazi ukuza nokuqonda okujulile nokuqonda. Kungale ndlela yokwazi ukuthi sifinyelela ekuqondeni okuphezulu kwendawo yonke okungashintsha izimpilo zethu.
Kuzwakala kuyaphikisana, kepha lapho kwehlisa amagagasi obuchopho, kube lula okufundayo. I-Theta yisiqalo lapho ukubona, ukuphefumlelwa nobuciko kunamandla khona. Ukuzindla ne-yoga kuvame ukunconywa njengokuzuzisayo ngoba kukhiqiza amaza we-theta ebuchosheni. Abantu abaningi baphinda bathole okuhlangenwe nakho okungajwayelekile ngenxa yokuzwela okuphezulu ngesikhathi senkatha.
I-Delta - 0.5 kuya ku-4Hz
Ama-brainwaves ebhendini le-Delta ane-amplitude ephezulu kakhulu futhi abonwa ebuthongweni obukhulu. Lawa maqhuqhuva akha ithuba lokuvula kokuhlangenwe nakho okungaqondakali kanye nokuqonda okuqoqekile. Vele sonke siyawazi umphumela wokupholisa ovela ebuthongweni obuhle bokulala, obuhambisana nalawa maqhubu.
Ama-yogis anolwazi okwazi ukungena nokuzindla ngokujulile angakwazi ukuxhumana ne-subconscious yawo. Lokhu kufakwa ezintweni ezinjengokuzelapha, ukuqonda okuphezulu nokuhlakanipha mayelana nezici eziningi zokuphila kanye nokuba khona kwethu.
Uyakwazisa lokhu okuqukethwe futhi ufuna ukungisiza ngokwezimali?
Ngenza le webhusayithi ngokunakwa okukhulu nothando futhi ngenza okuqukethwe kutholakale ngezilimi ezahlukahlukene ukufinyelela abantu abaningi ngangokunokwenzeka. Ngifuna ukugwema ukukhombisa izikhangiso kuyo yonke indawo ngakho-ke ngicela umnikelo omncane onikela ezindlekweni zanyanga zonke. Ngibonga kusengaphambili, ngazisa wonke umnikelo!
Umnikelo wesikhathi esisodwa Njalo ngenyanga Njalo ngekota Minyaka yonke
Inani * Faka isamba sakho€ 1,00€ 2,00€ 5,00€ 10,00€ 25,00€ 50,00 AEDAUDBGNCADCHFCZKDKKEURGBPHKDHRKHUFILSISKJPYNokI-NZDPHPPLNRONRUBSEKSGDUSDZAR
Inkinobho Yokukhokha ye-KBC / CBC
Inkinobho ye-Belfius Pay
Ngigunyaza-ke ukuqoqa imali engenhla kwi-akhawunti yami ngezikhathi ezithile.
izindatshana eziningi ngakho
Kungani uzindla nenyanga egcwele?
I-10 Januwari, 2020
Uthando lungukukhanya okulindelwe
I-18 ngoFebhuwari, 2020
Inkolo yeqiniso imayelana nokuthembana
Ngabe ufuna ukufunda ukuzindla? Yekani ukuzama!
Novemba 4, 2011
Ukuzindla nokuthuthuka kokwazi kwakho okuthile kwakho?
Ugijimela ukuthuthukisa ukuqina kwakho. Ejimini ufuna ukuqina ... kungani ungafundi ukusebenzisa amandla akho okuqonda kangcono? Ukudala, ukuqonda nenjabulo yangaphakathi kungafinyeleleka. Imininingwane engaphezulu? Gcwalisa ifomu bese ngizokuthinta ngokushesha okukhulu.
noma chofoza lapha bese wenza i-aphoyintimenti yakho ngokushesha
Thumela idatha yakho
Ukuhlelwa okujwayelekile Hlunga ngokuthandwa Hlunga ngokulinganisa okulinganiselwe Hlunga ngokusha Hlunga ngentengo: ephansi kuya phezulu Hlunga ngamanani: phezulu kuya phansi
€4.99 Ebhekheni yezitolo
€4.99 €2.49 Ebhekheni yezitolo
U-Edwin van der Hoeven CSNU
U-Edwin ungumNgisi Inyunyana Yezwe Yezomoya (SNU) eqinisekisiwe;
Okomuntu siqu ukubonisana
Ubhalisiwe njengomfundisi eCRKBO.
Isitatimende sekhukhi (i-EU)
Isitatimende se-Cookie (US)
© Imininingwane ekule webhusayithi ihlanganiswe ngokunakekelwa okukhulu, noma kunjalo kungahle kube namaphutha noma ukunganembi; awekho amalungelo angatholwa kulokhu.
Made nge ❤ by Inani Elingeziwe - U-Edwin van der Hoeven
Chofoza lesi sithonjana kumenyu ephezulu kwesokudla ukuvula le pop-up
Lalela ukuzindla kwakho kwansuku zonke lapha
Thola futhi lokhu kuzindla ku- SIMUNYE (reare-one.io)
Abantu abaningi banamahhala Ukuzindla kwe-Crown Chakra resonance ilandwe ukuze uzindle ngayo phakathi nenyanga egcwele. Ubuwazi ukuthi ukuma kwenyanga kuhlobene neChakras? Futhi yingakho kukhona ukuzindla okungafani kwe-resonance, okukodwa ngeChakra.
Le pop-up ikhombisa ukuzindla okuhambisana ne isikhundla samanje senyanga.
Uma ikhalenda lingabonisi, chofoza kulesi sixhumanisi! (isixhumanisi sivula ewindini elisha)
Ufuna ukwazi okuningi?
Ngithumele eminye imininingwane